Uyifaka njani inguqulelo yePlasma yamva nje kwi-Kubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
IPablinux | | Kubuntu, Tutorials, Ubuntu
Hayi. Kubuntu I-18.04 Bionic Beaver LTS ayinakho ukufaka Inguqulelo yePlasma okanye kwindawo yokugcina izinto ezingasemva. Ngokwam kubonakala ngathi kuyimpazamo ukunganikeli ngenkxaso yenguqulo yeLTS yamva nje yenkqubo yokusebenza, kodwa izizathu zabo ziya kuba nazo. Olona hlobo luhlaziyiweyo lwePlasma esinokulangazelela ukusuka eBionic Beaver yi-v5.12.7, ekungeyomfuneko ukuba isebenzise nayiphi na indawo yokugcina. Kodwa ngaba singayifaka iPlasma 5.15.5 kwi-Kubuntu 18.04 LTS? Ewe unako, kwaye apha siza kukufundisa amaqhinga ukuze ukwazi ukukwenza.
Ngaphambi kokuqhubeka ndingathanda ukucebisa ngento: ukwenza njalo kuya kufuneka sihlele ezinye iifayile zoqwalaselo. Utshintsho KUCELWA ukuba lukhuseleke, kodwa Wonke umntu kufuneka abe noxanduva lwezenzo zakhe ukuba uthatha isigqibo sokuqhubeka. Abantu abaninzi basebenzisa la maqhinga ngaphandle kweengxaki, kodwa nanini na xa sisebenzisa isoftware ngendlela engafanelekanga sinokufumana ilitye endleleni. Emva kokucacisa oku, ndiza kunika iinkcukacha ngento ekufuneka ndiyenzile ukuze ukwazi ukusebenzisa inguqulelo yePlasma Ubuntu 18.04 LTS.
1 IPlasma 5.15.5 kwi-Kubuntu 18.04.x
2 Hlaziya nezicelo ze KDE
3 Eyona ilungileyo: ukuvuselelwa kuhlobo lwamva nje lweKubuntu
IPlasma 5.15.5 kwi-Kubuntu 18.04.x
Kuyimfuneko ukuba icace ngumahluko phakathi kwe «Plasma» kunye «Izicelo ze KDE»Eyokuqala yindawo yemizobo, ngelixa eyesibini yiphakheji yokwenza isicelo. Into yokuqala nekhuselekileyo ukuhlela ifonti ngokutshintsha igama. Inkqubo epheleleyo yokufezekisa oku imi ngolu hlobo lulandelayo:
Sifaka indawo yokugcina izinto ezingasemva ze KDE ngalo myalelo:
Emva koko, sivula ukuFumanisa.
Cofa ku «Ezikhethwayo».
Into elandelayo kukucofa kwi icon enemigca emithathu ephezulu ngasekhohlo kwaye ukhethe "Imithombo yeSoftware".
Sifaka iphasiwedi yethu.
Masiye kwi «Enye iSoftware».
Sikhetha umthombo weKubuntu Backports kwaye ucofe ku "Hlela ...".
Sitshintsha igama elithi "bionic" kwi "disk."
Siyagcina kwaye sivale.
Xa esibuza, sithi ewe ukuvuselela iindawo zokugcina.
Siyavala kwaye sivule ukufumanisa. IPlasma 5.15.5 iya kuvela njengogqibo olukhoyo.
Hlaziya nezicelo ze KDE
Oku kunzima ngakumbi kwaye kungengenxa yokuba kunzima kangakanani, kodwa kuba kufuneka hlela ifayile apho iifonti zigcinwa khona. Ithiyori ilula kodwa, kwakhona, wonke umntu kufuneka abe noxanduva lwezenzo zakhe ukuba bathatha isigqibo sokwenza olu tshintsho. "Icebo" iya kuba kukulandelayo:
Siya ku Ingcambu / njl / apt.
Senza ikopi yogcino lwefayile imithombo yolwazi, ngento enokwenzeka.
Sikhuphela umhleli wokubhaliweyo osivumela ukuba sihlele iifayile njengomlawuli okanye umsebenzisi wengcambu. Umzekelo, Intsiba.
Sivula ifayile imithombo yolwazi., Ekuya kufuneka sibhale kuyo "ipeni yothando" ngaphandle kwezicatshulwa, tsala ifayile kwisiphelo sendlela kwaye ucinezele u-Enter.
Sihlela imithombo, sishiya eyokuqala "iBionic" ingachaphazeleki. Sitshintsha ezinye ezintathu zibe "yidisco".
Kwifonti yokuqala sibeka leyo yeDisco Dingo:
Sivula i-Discover kwaye sijonge ukuba ingaba yonke into ihambe kakuhle na. Kunzima ukwenza njalo. Kwimeko elungileyo, siya kubona iimpazamo ezininzi ngaphambi kokujonga iipakeji ezikhoyo.
Ndikwazile ukuyifaka kumatshini obonakalayo, kodwa andiqinisekisi ukuba sonke sikwimeko efanayo. Ukuba kungxamisekile kuwe ukuba uneenguqulelo zamva zeZicelo ze KDE, ungahlala uzama ukutshintsha enye ye "bionic" ye "disk" kwaye uye kuvavanyo. Eyokuqala kufuneka ibe ngokuchanekileyo njengoko isitsho apha ngasentla. Ukuba ayizukuphuma, kwanele ukubuyisa i-backup ebesiyenzile kwinyathelo lesi-3 loluhlu lwangaphambili. Enye inketho kukukhuphela iiphakheji zesiseko sezicelo kwaye wenze ufakelo lwencwadi ngesandla.
Eyona ilungileyo: ukuvuselelwa kuhlobo lwamva nje lweKubuntu
Ngaphambi kokuba ndigqibe esi sifundo, ndingathanda ukunika uluvo lwam malunga nayo yonke le nto: Njengomsebenzisi ohlaziya inkqubo yokusebenza rhoqo kwiinyanga ezi-6, ngamanye amaxesha ukusuka ekuqaleni, ndiyacinga Kungcono uhlaziye inkqubo yokusebenza Kwinguqulelo yamvanje kwaye ungeze indawo yokugcina izinto ezingasasebenziyo kuyo. Unenqaku ngendlela yokuhlaziya ngokuthe ngqo kwi-X-buntu 18.04 apha, kunye nenye ukuba sisebenzisa uhlobo oluphambili ngakumbi apha.
Ngaba ukwazile ukufaka inguqulelo yePlasma kunye / okanye iZicelo zeKDE kuKubuntu 18.04.x?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Uyifaka njani inguqulelo yePlasma yamva nje kwi-Kubuntu 18.04 LTS
Ndifuna ukushiya uluvo lokugqibela kwaye inguqulelo ye-plasma 5.12.7 yafakwa kwi-repos ngaphandle kwesidingo sokongeza nayiphi na ingxelo.
Enkosi ngenqaku. Kuyabonakala ukuba ukuthatha uKubuntu 18.04 ngoku kuvela uguqulelo oludlulileyo kwaye oko kundididekile. Ndiyayiguqula.
Uyisusa njani ipakeji yePappak, Snap, okanye AppImage